Nezvedu - Nanchang Qinglin Automobile Accessories Co., Ltd.
Industrial Zvigaro Zvigaro
Yakakwira-Yakaringana Kuyedza Midziyo
Nanchang Qinglin Automobile Chishongedzo Co., Ltd. inyanzvi yekugadzira zvigaro ane makore ane ruzivo. Zvigadzirwa zvedu zvikuru zvigaro zvekurima, zvigaro zvekuvaka, zvigaro zvebindu uye zvimwe zvikamu zve auto.
KL Kugara yakavambwa mu2001 nenzvimbo yemakumi maviri nematanhatu emamirimita. Tine maviri ekugadzira zvigadziko: Nanchang, Jiangxi uye Yangzhou, Jiangsu. Iine vashandi vakakwana vane hunyanzvi, KL Seating inokwanisa kuburitsa zvigaro zve400,000pcs pagore.
Tine akakwana Management System uye yakanakisa R&D timu. Zvese zvigadzirwa zvedu zvakapfuura ISO9001: 2015, CE uye PAHS chitupa. Zvigadzirwa zvedu ndezveDomestic OEM uye yekumhiri kwemaketmarkmark, senge Europe, America, Australia, South Asia, nezvimwe.
Iine Enterprise Nheyo yevatengi kutanga, basa reboka, basa rakanakisa, KL zvigaro zvichaita zvakanyanya kupa zvigaro zvakanaka uye zvekuchengetedza zvigaro, kuyedza kuve wepasi rese chigadziri uye mugadziri.
Ipa zvigaro zvakachengeteka, zvakanaka uye zvine hupfumi kune vatengi nehunyanzvi hwedu hwehunyanzvi.
Kuve wepasi rese chigadziri uye mugadziri.
Mutengi kutanga, kubatana, kuita utsva, kushuva, kuvimbika, kuzvipira
Nanchang Qinglin Automobile Chishongedzo Co., Ltd.